Calaamada 2 ee Ibraahim: Xaqnimadu - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Waa maxay waxa aanu uga baahanahay dhamaanteen Ilaah oo xagiiska ka yimid? Waxaan ku fikiri karnaa jawaabo faro badan in su’aashaas, laakiin Calaamada Aadan waxay ina xusuusinaysaa in marka hore baahideenna ugu weyn waa xaqnimo. Halkaas waxaan ka helnay erayo si toos ah wax laynugu sheegay (Caruurtii reer Aadan).
Banii Aadamow waxaan idiin soo Dejinay Dhar Astura Xumaantiinna (Cawrada) iyo Labbis (Xarago) dharka dhawrsashada yaase Khayr roon, Laakiin dhar xaqnimada – in uu yahay sida ugu fiican. Kaasina waa Aayaadka Ilaah inay Dadku wax Xusuustaan.
Surat Al- Araf 7:26
Sidaas waa maxay ‘xaqnimo’? Tawreed ah (Sharciga Kunoqoshadiisa 32: 4) waxa uu inoo sheegayaa in Eebe
Anigu waxaan naadinayaa magicii Rabbiga. Idinku weyneeya Ilaaheenna. Isagu waa dhagaxa, shuqulkiisuna waa kaamil, Waayo, jidadkiisa oo dhammu waa caddaalad, Isagu waa Ilaah aamin ah, oo aan xumaan lahayn, Isagu waa xaq, waana caaddil.
Tani waa sawirka Xaqnimada Ilaah siiyey Tawreed. Xaqnimadu waxay ka dhigan tahay in mid uu yahay kaamil, ma aha jidadkiisa qaar ka mid ama inteeda badan,, laakiin kulli inay kaamil yihiin. Siyaabadiisa xaqa yihiin, mid ma jirin (xitaa in yarna) oo khaldan; oo uu mid qumman yahay. Tani waa xaqnimada iyo sidoo kalena tani waa sida Tawreedku u qeexayo Ilaah. Laakiin maxaan ugu bahaan nahay xaqnimada? Waxaan ka hor boodaynaa qayb ka mid ah Zabur si jawaabta aan u helno. Sabuurka 15 ( qoray Dawood NNKH) waxaan ka akhrisan:
Rabbiyow, bal yaa taambuuggaaga ku fadhiyaya? Oo bal yaa buurtaada quduuska ah degganaanaya? 2 Waa kii si qumman u socda, oo xaqnimo sameeya, Oo qalbigiisa run kaga hadla. 3 Waana kii aan carrabkiisa wax ku xaman, Ama aan saaxiibkiis xumaan ku samayn, Ama aan deriskiisa cay ku soo hadal qaadin, 4 Kii indhihiisu ay nejiska quudhsadaan, Oo isagu murweeya kuwa Rabbiga ka cabsada, Kii hadduu dhaarto oo ay waxyeello ku tahay, aan isbeddelin, 5 Kii aan lacagtiisa u soo bixin korsocod, Ama aan laaluush u qaadan inuu wax yeelo kuwa aan xaqa qabin. Kii waxyaalahaas sameeya weligiis lama dhaqaajin doono.
Sabuurradii 15: 1-5
Marka waxaa la weydiiyay bal yaa ku sii noolaan karaa ‘Buurta Quduuska ah’ ee Ilaah, taasi waa hab kale oo loo waydiinayo kuwa Ilaah janada Kula noolaan doonaa. Oo waxaan ka arki kartaa jawaabta in mid ka mid ah waa kuwa aan ceeb lahayn iyo ‘kuwa xaqa ah’ ( v2 ) – Qofkaasi geli karaa Jannada in uu Ilaah kula noolaado. Tani waa sababta aan ugu baahanahay xaqnimo. Xaqnimada ayaa loo baahan yahay si loola joogo Ilaah maadaama uu yahay dhammaataan xaq ah.
Iyada oo baahida loo qabo maanka lagu haynayo waxaan u baahanahay in aan hadda tixgelino calaamadii labaad ee Ibraahim (NNKH). Riix halkan in la furo marinka Kutubta. Waan aragnaa akhriska Tawreed iyo Quraanka in Ibraahim(NNKH) raacay ‘Jidkiisaqaaday'(Surat 37:83) iyo in uu sidaas sameeyo uu helay ‘xaqnimo'(Biloowgii 15: 6) – Wax keliya ee sugan calaamada Aadan noo sheegay in aan u baahanahay. Haddaba su’aasha noogu muhiimsan waa: Sidee buu Ibraahim (NNKH) ku helay xaqnimada?
Inta badan waxaan ku fikiri karaa in aan xaqnimada aan ku heli karo mid ka mid ah laba siyaabood. Habka ugu horeeyay (ee aan ku fikiri karo) waxaan ku helaa xaqnimada in aan rumeeyo ama aqoonsado jiritaanka Ilaah. Waxaan‘rumaysnahay’Ilaah. Oo aan taageero fikirkan, ma uusan Ibraahim (NNKH) ‘Rabbiga rumaysan’ Biloowgii 15:6? Laakiin iyadoo laga fekerayo wax dheeraad ah waxaan ogaaday in aanay tani ahayn macnaheedu in uu kaliya rumaysnaa jiritaanka Ilaah oo keliya. Maya Ilaah wuxuu u siiyay ballan heegan – In uu heli lahaa wiil. Haddaba waxay ahayd balantaas in uu Ibraahim (NNKH) wuxuu lahaa si uu u doorto in aamino iyo in uusan aaminin. Ka fikir waxa ku saabsan oo dheeraad ah, Ibliiska(sidoo kale loo yaqaan Shaytan ama Ibliis) ayaa aaminsan jiritaanka Ilaah- Oo dhab ahaantii ma uu haysto xaqnimo. Sidaas “Jidka” ma ahaan in aan si keliya aan aamino jiritaanka Ilaah. Taasi ma ahan mid ku filan.
Jidka labaad ee aan inta badan ku fikiro in aan xaqnimo ka heli karo waa in aan mutaystaa ama ka kasbaday xaga Ilaah oo ka yimid wanaaga aan sameeyo. Sameynta waxyaabo badan oo wanaagsan oo ka badan waxa xun, ama aan sameeyo nooc gaar ah ama tiro shaqeed diimeed taasoo ii ogolaaneysa in aan u qalmo, kasban karo ama aan mudnaan karo xaqnimo. Laakiin u fiirso ma ahan waxa uu Tawreedku leeyahay oo dhan. Waxaan soo xiqanayaa qayb ka mid ah Tawreedka mar kale sidaas darteed waxaan dhab ahaan u arki karnaa.
Aabraam Rabbiga rumaystay, oo uu [i.e. Ilaah] waxaa isaga loogu tiriyey [i.e. Ibraahim] xaqnimo.
Biloowgii 15: 6
Ibraahim (NNKH) ma uusan ‘kasban’ xaqnimada; Waxay ahayd mid lagu “tiriyey’ isaga. Sidaas aawadeed waa maxay kala duwanaanshuhu? Hagaag, haddii wax la ‘kasbaday’ waa u soo shaqeystay – waad mudan tahay. Waxay u eg tahay in aad heshid mushahaarka shaqada aad qabatay. Laakiin marka wax lagu tiriyaa, waa wax laydin siiyay. Ma ahan wax aad kasbatay ama ku talaabsatay, laakiin aad ku heshay hadiyad ahaan.
Sidaas aawadeed Ibraahim (NNKH) wuxuu ahaa nin aaminsan una rumeysan si qoto dheer jiritaanka hal Ilaah. Oo isna wuxuu ahaa nin tukada, kaliyeeli, iyo caawinta dadka (Sida caawinta iyo una tukanayay wiilka uu adeer u yahay ee Luudh/Luudh). Sidaas aawadeed ma ahan in aynu waxaas iska tuurno. Laakiin ‘jidka’ Ibraahim ku helay xaqnimada waa mid aad u fudud oo aan si sigasho leh aan ka maqnaan karnaa. Tawreed wuxuu inoo sheegayaa in Ibraahim (NNKH) waxaa xaqnimo la siiyey sababtoo ah waxa uu rumaystay in ballanqaad isaga uu siiyey Ilaah. Tani waxay ku bedeshay fahamka caadiga ah in aan kala hadlayay in la helo xaqnimada midkood fikir ahaan aaminid in jiritaanka Ilaah uu ku filan yahay, ama innagoo sameeynaya hawlaha wanaagsan oo diinta ku filan in aan heli karno ama xaqnimo mudnaan karno. Tani ma ahan jidkii Ibraahim qaaday. Wuxuu si fudud ku doortay in uu aamino ballanqaadkii.
Haddaba doorashada in ay aaminsan yihiin in ballanqaadkii wiil ahaa dabcan waxay ahayd mid fudud laakiin waxaa hubaal ah in aysan ahayn mid sahlan! Ibraahim (NNKH) waxaa laga yaabaa inuu si fudud u dadarreen lahaa ballantii isagoo ka hadlaya in haddii Ilaah lahaa rabitaan iyo sidoo kale awood uu leeyahay inuu isaga wiil siiyo kadibna wuu samayn lahaa oo uu hadda siin lahaa. Maxaa yeelay, markan naftiisa, Ibraahim iyo Saaray (naagtiisa) waxay ahaayeen waayeel – Si fiican u dhaafay da’da carruurta lagu dhalo. Xusuusnoow Tawreedka Calaamada koowaad ee Ibraahim in uu hore u ahaa 75 sannadood markuu dalkiisa ka tagay oo uu aaday Kancaan. Isla markaas ayaa Ilaah u ballanqaaday in uu heli doono ‘quruun weyn’ Oo dhawr sannadood baa laga joogaa tan iyo markii Ibraahim iyo naagtiisii Saaray oo hadda run ahaantii dad waayeel ah oo waqti dheer sugayey. Oo iyana weli ma yeelan xitaa hal cunugna – Oo dhab ahaan aan quruun ahayn! “Waa maxay sababta uusan Ilaah horay noo siinin wiil haddii uu sidaas sameyn karayo”?, ayuu is lahaa. Haddii si kale loo dhigo, wuu rumaysnaa ballanqaadkii wiilkii soo socda inkastoo u badan tahay waxay lahaayeen su’aalo aan loogga jawaabin oo ku saabsan ballanqaadkii. Waxa uu rumeysan yahay ballanqaadkii sababtoo ah waxa uu isku halleeyey Ilaah in uu siiyey ballanqaad – Inkastoo uusan garan wax kasta oo ku saabsan ballanqaadkii. Oo uu aaminsan yahay ballanqaadkaas (wiilka soo socda iyadoo la soo dhaafay da’da carruur-dhalista) u baahan tahay aaminid in Ilaah samayn karo mucjiso isaga iyo naagtiisa.
Oo aaminida ballanqaadkii waxaa sidoo kale loo baahan yahay sugitaan firfircooni ku salaysan. Noloshiisa oo dhammuna wuxuu ahaa, in dareen, oo uu hakiyey intuu ku noolaa teendhooyin Dhulka Ballanqaadka reer Kancaan kuna sugayey (Sannado weli badan) imaatinka wiilka loo ballanqaaday. Waxa ay noqon lahaayeen kuwa inta badan ka sahlan in ay iska dandarreeyaan ballanqaadkii oo ay ku soo laabtaan gurigoodii halkii ilbaxnimada Mesobotamiya (casriga – maatana loo yaqaan Ciraaq) in uu kaga tegey sannado badan ka hor halkaas oo uu walaalkiis iyo qoyskoodu ay weli ku noolaayeen. Sidaas aawadeed Ibraahim waa in uu ku noolaadaa dhibaatooyin si uu u sii rumeeyo ballanqaadkii – Maalin kasta oo – Sannado badan halka uu sugayay ballanqaadkii la siinayo. Uu isku halleeyay, ballanqaadkii ahaa sidaas u weyn oo qabsaday mudnaan badan noloshiisa inteeda kale – raaxada iyo fayo-qabka. Si dareen run ah, noolal la eegaayo in ballanqaadkii loogu tala galay in ay u dhimanayaan nolol caadi ah. Aaminid ballanqaadkii waxay tustay ku kalsoonaantiisa iyo jacaylkiisa uu u leeyahay Ilaah.
Sidoo kale ‘aaminidu’ ku salaysan ballanqaadkii waxay tageen meel ka durugsan heshiis maskaxeed. Ibraahim wuxuu lahaa inuu saamiyeeyo naftiisa , sumcadiisa, ammaankiisa, falalka la joogo iyo rajada mustaqbalka ee ballanqaadkan. Isagu wuxuu aaminsan yahay, haddaba wuu ahaa mid firfircoon oo mudeecnimo ku sugayay.
Sidoo kalena Calaamada Ibraahim (NNKH) waa sida uu aaminsan yahay ballanqaadkii Ilaah ee wiilka, iyo in sidaas samaynaya uu sidoo kale la siiyey, ama lagu tiriyaa, xaqnimo. In dareenka dhabta ah Ibraahim wuxuu isu soo gudbiyey naftiisa ballanqaadkan. Wuxuu ka dooran lahaa in uusan rumaysan oo uu dib ugu laabto dalkii uu ka yimid (Maanta – loo yaqaan Ciraaq). Oo isna wuu dandarren lahaa balaanqaadkii halka uu weli ka rumeeysan yahay jiritaanka Ilaah oo weli uu sii wado salaadda iyo caawinta dadka kale. Laakiin markaas wuxuu kaliya uu haysan lahaa diintiisa laakiin aan looma tiriyay ‘xaqnimo’. Oo Quraanku noo sheegayaa innaga oo dhan in aan nahay caruurtii Binu Aadam – ‘Dhar xaqnimada – in uu yahay kan ugu fiican’. Tani waa jidka Ibraahim.
Oo sidaas daraaddeed waxaan baranay wax badan. Xaqnimadu, wax aad u baahan nahay Jannada ma ahan in aan kasbano laakiin waa in loo tiriyo. Oo waxaa laynoogu tiriyaa markaan aamino ballanqaadkii Ilaah. Laakiin Calaamadaha Ibraahim ma ahan kuwo weli dhamaystirran. Waxaan sii wadi doonaa Calaaada 3.
Tags:Biography of ibrahimIbraahim TawreedIbrahim in al KitabIbrahim in BibleIbrahim in Tawreedibrahim iyo IsxaaqIbrahim Quraankaina IbraahimNabiga Ibrahim in TawreedNebi Ibraahim ee Kitaabka Quduuska ahNebi Ibraahim ku TawreedNebi Ibrahim in al Kitabsida ibrahim helay Isxaaqsidee Ibrahim heli Isxaaqsidee ibrahim heli wiilkiisastory of Ibrahimtaariikhda of Ibrahimyabooha Eebe wiil si Ibrahim